Farmaajo oo La Taliyihiisa raba in uu u magacaabo Guddoomiyaha Guddiga Doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo La Taliyihiisa raba in uu u magacaabo Guddoomiyaha Guddiga Doorashada
Cabdi Cali Raage oo ah La Taliyaha arrimaha Doorashooyinka ee Madaxweyne Farmaajo ayaa la hadal hayaa in loo magacaabo Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdi Cali Raage oo ah La Taliyaha Madaxweyne Farmaajo ee arrimaha doorashooyinka ayaa la hadal hayaa inuu u dhow yahay in loo magacaabo Guddoomiyaha Guddiga Doorashada dad-ban heer Federaal sida ay ogaatay Keydmedia Online.
Haddii magacaabidan ay rasmi noqoto waxaa uu Madaxweyne Farmaajo bareejeyn doonaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh oo La Taliyihiisii Arrimaha Sharciga Avv. Cumar Dhagey u magacaabay Guddoomiyaha Guddigii Doorashada dadban sanadkii 2016.
Heshiis siyaasadeedka doorasho ay dhawaan gaareen Madaxda Dowladda iyo Dowlad Goboleedyada ayaa dhigayay in la soo dhiso guddiga Doorashada heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed kadib markii la baabi'yay kii ay Xaliimo yarey hoggaamineysay.
Bishii April ee sanadkii 2019 ayay aheyd markii Axmed Madoobe uu xilka ka qaaday Cabdi Cali Raagge oo ahaa La Taliyihiisa sare ee Arrimaha Siyaasadda, xil ka qaadistaas ayaa salka ku heysay howlihii doorashada Jubbaland, waxaana Mr Raagge ka mid ahaa raggii ugu horreeyay ee ka hor-yimid Axmed Madoobe.
Fahad Yaasiin muxuu ku maagay wariye C/laahi Kulmiye Caddow?
Warar 19 October 2020 19:14
Wariyahan ayeey ciidanka NISA si sharci darro ah u xireen.